समाचारहरु » अब यसरी बन्छ संविधान
काठमाडौ, श्रावण २५ - संविधान विधेयक निर्माण, सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेमा देशले भदौको १० सम्ममा नयाँ संविधान पाउने सम्भावना छ। यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच साउन मसान्तमै संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो।
संवाद समितिको आइतबारको बैठकले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले अघिल्लो मध्यराति सहमति गरेको ६ प्रदेशमा सीमांकनसहितको प्रस्ताव छलफलपछि अनुमोदन गरेको छ। समितिले संविधानको मस्यौदा परिमार्जनका लागि तयार गरेको सहमतिको प्रतिवेदन आइतबारै संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ।
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। संविधानसभाले उक्त प्रतिवेदन सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरेपछि दिने सुझाव र निर्देशनका आधारमा संविधान मस्यौदा समितिले संविधानका विधेयक तयार गर्नेछ। संविधान विधेयक तयारीका लागि मस्यौदा समितिले बढीमा चार दिनको समय पाउने सम्भावना छ।
मस्यौदा समितिले संविधान विधेयक प्रस्तुत गरेपछि संविधानसभामा संक्षिप्त सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ।
सैद्धान्तिक रूपमा पारित विधेयकमाथि संशोधन दर्ताका लागि सभासदहरूलाई दुई दिनको समय दिने र दफाबार छलफल अघि बढाउने संविधानसभा सचिवालयको गृहकार्य छ। यसका लागि संविधानसभाले आफ्नो नियमावलीका दुई प्रावधान निलम्बन गर्नुपर्छ। नियमावलीमा उल्लिखित संविधान विधेयक पेस गर्नु तीन दिनअगावै सभासदहरूलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने र संशोधनका लागि ७ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधान निलम्बन गर्दा बचत हुने ५ दिनको समय दफाबार छलफलमा उपयोग गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनायो ।
संवाद समितिबाट संविधानसभामा आइतबार प्रस्तुत मस्यौदा अब निम्न प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ–
१. संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ
२. परिमार्जनका लागि मस्यौदा समितिमा पठाइन्छ
३. मस्यौदा समितिले परिमार्जन गरी संविधान विधेयक बनाउँछ
४. परिमार्जित मस्यौदा समितिले सभाध्यक्षलाई बुझाउँछ
५. संविधानको विधेयक अध्ययनका लागि सभासदलाई दिइन्छ
६. विधेयकमाथि संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ
७. संशोधनका लागि सभासदलाई समय दिइन्छ
८. संशोधन प्रस्तावसहितको विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुन्छ
९. विधेयक संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ
१०. सर्वसम्मत नभए मतदान प्रक्रियामा जान्छ
११. प्रस्तावनासहितको एकीकृत विधेयक पारित गरिन्छ
१२. सभासदहरूले हस्ताक्षर गर्छन्
१३. सभाध्यक्षबाट प्रमाणीकरण हुन्छ
१४. राष्ट्रपतिबाट जारी गरिन्छ
स्रोत : इकान्तिपुरडटकम, २०७२ श्रावण २५